भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमाबाट मान्छे छिर्न प्रेरित गरे: मुख्यमन्त्री पोखरेल (भिडिओ) :: Setopati
भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमाबाट मान्छे छिर्न प्रेरित गरे: मुख्यमन्त्री पोखरेल (भिडिओ)
भगवती पाण्डे काठमाडौं, जेठ ४
प्रदेश नम्बर ५ मा कोरोनासंक्रमितको संख्या एक सय नाघेको छ।
भारतसँग सबैभन्दा धेरै खुल्ला सीमाना भएको प्रदेश पनि ५ नम्बर प्रदेश नै हो। पछिल्लो समय भारतबाट लुकीछिपी आएका व्यक्तिहरुमा धमाधम कोरोना देखिन थालेको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन प्रदेश-५ ले के गर्दैछ? परीक्षणको दायरा बढाउने विषयमा प्रदेशको तयारी कस्तो छ? सेतोपाटीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग कुराकानी गरेको छ -
यस अन्तर्वार्ताका मुख्य बुदाँ:
प्रदेश ५ मा जति कोरोना देखिएका छन् त्यसको स्रोत भारत हो। नेपालगञ्जमा भारतबाट आएका संक्रमित मार्फत समुदायमा सरेको देखियो।
हामीले भारतमा २१ दिन बसेकालाई ल्याउने काम गरेका छौँ। तर उहाँहरु क्वारेन्टिनमा नबसेकालाई पनि पठाउने काममा सक्रिय देखिनुहुन्छ। नाकामा आएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा नराखी कमजोर नाका खोजेर भित्र जान प्रेरित गर्ने जुन तरिका भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट भैराखेको छ त्यो उचित होइन।
संक्रमितहरुलाई यात्रा गराउन मिल्दैन। डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार बिरामीले यात्रा गर्न मिल्दैन। भारतीय पक्षले तसर्थ संक्रमितहरुलाई यात्रा अनुमति दिनु पूर्णत गलत कुरा हो।
सीमा नाकाबाट लुकिछिपी आउनेलाई समेत समुदायमै क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ। नाकाबाट आउनेलाई परीक्षण अनिवार्य गरका छौँ। तसर्थ हाम्रो कमजोरीले फैलने अवस्था छैन। तर संक्रमित भएर आएकाहरुको संख्या बढ्ने अवस्था छ।
भारतबाट आउनेहरुलाई परीक्षण पछि मात्रै समुदायमा पठाउछौँ। हामी प्रदेश ५ मा दैनिक ६ सय परीक्षण गर्न सक्छौँ।
हामी अस्पतालहरुलाई आइसोलेसन सेन्टर र कोरोना विशेष अस्पतालका रुपमा वर्गिकरण गर्छौँ । जसमा रोगका लक्षण देखिएको छैन त्यस्ता बिरामीलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्छौँ। जसलाई लक्षण देखिएको छ उसलाई कोरोन विशेष अस्पतालमा राखेर उपचार गर्छौँ। पहाडी जिल्लाहरुले अब ५० बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउनेछन्। त्यहाँ लक्षण नदेखिएका बिरामी राख्नेछौँ। तराईका जिल्लाले २०० बेडका यस्तै अस्पताल बनाउनेछन्।
सबैलाई परीक्षण गर्दैमा सुरक्षीत भइदैँन। आवश्यक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण नेगेटिभ आएका व्यक्ति सँधैका लागि सुरक्षीत हुन्न। त्यस्ता व्यक्तिले सँधैभरी सुरक्षा अपनाउनै पर्छ। एकपटक परीक्षण गरेर ढुक्क भइन्छ भनेर तमासा देखाउने सोच हो भने त्यो पूर्णत कोरोनाका सन्दर्भमा गलत सोच हो।
हामी कहाँबाट गएर भारतमा संक्रमण देखियो भन्ने हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। तर भारतबाट आउनेहरु संक्रमित भएकाले हामीले असर बेहोरिराखेका छौँ।
तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बजारबाट धानको बिऊ ल्याउने प्रवृती रहेछ। सर्टिफाइड धानका जात ल्याउन सहज पारिएको छ।
निजी अस्पालले कतिपय अवस्थामा बिरामी नलिने अवस्था देखिएकाले हामीले सरकारी अस्पतालाई नै कोरोना विशेष अस्पताल र अन्य उपचार गर्ने अस्पतालका रुपमा वर्गिकरण गरेका छौँ। समस्याको समाधान सरकारी अस्पतालबाटै गर्न तयारी अवस्थामा राखेका छौँ।
चल्ला उत्पादन गर्ने साना किसान र दुध उत्पादन गर्ने कृषकका लागि राहतको कार्यक्रम बनाएका छौँ। बिऊ उत्पादन गर्ने कृषकलाई पालिकाबाट अनुदान दिने नीति पनि ल्याएका छौँ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, जेठ ४, २०७७
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल गर्न ओली-दाहालबीच आज पनि भेट
वामदेवबारे नेकपामा फेरि किचलो, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ
महाधिवेशनमा जुट्यो राप्रपा
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका पछिल्ला निर्णय
सिद्धार्थ राजमार्गको अवस्थाबारे सरोकारवालासँग मन्त्री अर्यालको छलफल